Latest Post 1847
အီဂျစ်လူငယ်များအတွက်ICTနယ်ပယ်ဆိုင်ရာပညာသင်ဆုများကိုပေးအပ်ရန်Orange Egyptနှင့်Elsewedy သဘောတူစာချုပ်
ထိုပညာသင်ဆုမှာ သုံးနှစ် ကြာမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းနှင့် အချက်အလက်နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ပိုမိုများပြားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ အီဂျစ်လူငယ်များကို ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးမည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။... Read full article
တပ်ကြပ်ကြီးသားဖွား ဒီပလိုမာသင်တန်း အတွက် သင်တန်းသားများခေါ်ယူလျက်ရှိ
တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့များအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော တပ်ကြပ်ကြီးသားဖွား လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူလျက်ရှိပါသည်။ ... Read full article
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများဖွင့်ထား
လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများမှ အတတ်ပညာများဖြင့် စတင်လာတော့မည့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်လာနိင်သည့် တန်ဖိုးမြင့်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာ သင်တန်းတွင် ကိတ်မုန့်၊ နနွင်းမကင်း၊ ရေခဲမုန့် စသည့် မုန့်လုပ်နည်းများ သင်ကြားပေးလျက်ရှိ... Read full article
ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းမှ မသန်စွမ်းသူများအတွက် မုန့်ဖုတ်နည်းသင်တန်း ဖွင့်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မသန်သော်လည်းစွမ်းသည့် လူငယ်များ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများပိုမို များပြားလာစေရန်၊ မိသားစုကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပြန်လည် ထောက်ပံ့နိုင်ရန် နှင့် ဝင်ငွေများ ပိုမိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ... Read full article
သူနာပြုသားဖွားသင်တန်းကျောင်းများတွင် သင်တန်းသား အယောက် ၄၀၀၀ ကျော်အထိ တိုးမြှင့် ခေါ်ယူမည်
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် အတွက် ဒီပလိုမာနှင့် ဘက်စုံသားဖွားသင်တန်း များအတွက် သင်တန်းသားများ အရေအတွက် တိုးမြှင့်ခေါ်ယူလျက်ရှိပါသည်။ ... Read full article
ကွန်ပျူတာ ဒီပလိုမာ တပ်ကြပ်ကြီး/စာရေး သင်တန်းသား(အမျိုးသား)များ လျှောက်ထားရန်
ကွန်ပျူတာ ဒီပလိုမာ တပ်ကြပ်ကြီး/စာရေး သင်တန်းသား(အမျိုးသား)များ လျှောက်ထားရန် ... Read full article
ဗီယက်နမ် မှ တိုင်းတစ်ပါးသားဆရာများရဲ့ မှောင်မိုက်နေ့ရက်များ
ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ တိုင်းတစ်ပါးမှ အာရှနိုင်ငံ အသီးသီးမှာစာလာသင်တဲ့ ဆရာများထံ ကံဆိုးမိုးမှောင် ကျလာပြီး ဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေကာ ကျောင်းတွေပိတ်လိုက်ရတာမို့ အလုပ်မဲ့တွေဖြစ်သွားကြပြီး ဝမ်းရေး အတွက် အလှူခံနေရတယ်သိရပါတယ်။... Read full article
B.H.M.S. Switzerland တွင် ဩဂုတ်လ ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်
Business and Hotel Management School (B.H.M.S.)မှ သြဂုတ်လ ကျောင်းဖွင့်ချိန် အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူနေပါတယ်။... Read full article
“နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ကျောင်းသစ်များဖွင့်လှစ်ရာတွင် ပထမဦးစွာ ခရိုင်မြို့ကြီးများတွင် ဦးစားပေး စတင်ဆောင်ရွက်သွားရန် မူဝါဒ ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသဖြင့် ခရိုင်မြို့ကြီးဖြစ်သော မင်းဘူးမြို့နယ်တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ... Read full article
ဇာတ်ကောင်လှုပ်ရှားမှုနှင့် အဆင့်မြင့်မီဒီယာ ကျွမ်းကျင်အထူးပြုဘာသာရပ် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဖြင့် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်နှစ်အတွက် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)နှင့် MCC Group တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် အနုပညာ ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။... Read full article
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် The Nippon Foumdation တို့ပူးပေါင်း၍ သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယေ်ရးနည်းပညာ သင်ကြားလေ့ကျင့်ရေးစင်တာ (ICT Training Center) တွင် အွန်လိုင်း ကွန်ပျူတာသင်တန်း အပတ်စဉ် (၁) အား... Read full article
စတင်လျှောက်နိုင်ပြီဖြစ်သည့် Food Science, Technology and Safety Online Course
Food Science, Technology and Safety Online Course သည် အစားအစာထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ၊ အစာအာဟာရဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရပ်များနှင့် အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို လူတိုင်းလေ့လာနိုင်ခွင့် ရရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ Food Science, Technology a... Read full article